कार्गाेमा हिडेन कस्ट बढी भयो: राजन शर्मा
बुधवार, जेठ १४, २०७७ १०:४१:३४ Wednesday, 27 May, 2020
शनिवार, श्रावण १८, २०७६ News Missile
समुद्रपार व्यापारमा नेपालसँग सीधा सम्पर्कमा रहेको कोलकाता बन्दरगाहबाट कार्गो आयात घटेपछि व्यापार बढाउन कोलकाता पोर्टका अधिकारीहरू नेपाल आएका छन् ।
कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलसेवासँग सीधा सम्पर्क रहेको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट कार्गो आयात हुँदै आएको छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाली आयातकर्ताहरूले आयातमा बेहोर्नुपर्ने झण्झट कम नहुँदा विशाखापटनमतर्फ व्यापार बढेको छ।
यता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट कार्गोमा पनि भ्याट लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेपछि व्यवसायीहरू निरास देखिएका छन्। उनीहरु सरकारले कार्गोकाे परिभाषा समेत सरकारले नबुझेको जनाएका छन्। यसै विषयमा नेपाल फ्रेट एण्ड फर्वाड्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मासँग गरिएको कुराकानीको अंश:
अन्य ढुवानी व्यवसायीलाई जस्तै कार्गो व्यवसायीलाई व्यावहार गरियो, अन्य ढुवानी व्यवसायमा जस्तै भयाट लगाइयो भन्नु भएको छ, अन्य ढुवानी व्यवसाय र यसमा के फरक छ, भ्याटको सवालमा हुनु पर्ने के हो ?
हामी ढुवानी व्यवसायी हुदै हैनौ यो कुरा बुझ्नु पर्‍यो। हामी त एउटा सर्भिस प्रोभाइडर मात्रै हौँ। हामीसँङ कुनै किसिमको ट्रक हुँदैन, सिप हुँदैन, जहाज हुदैन। हाम्रो काम एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म भनौ जर्मनीबाट नेपालको सोलुखुम्बूबाट सामान पठाइदिनु पर्दा पर्ने विभिन्न काम हुन्छ।
यी कार्यमा गर्नुपर्ने जतिपनि प्रकिया हुन्छन् विभिन्न कार्यका कोअर्डिनेशन गरेर सामान आयात निर्यात गर्नेलाई सहज र सरल बनाइ दिने हो। विभिन्न किशिमका कर समुन्द्रपार भएको व्यापारको पनि भ्याट लगाउने हो भने त हामीले त काम गर्न सक्दैनौ।
लजिस्टिक खर्च निकै महंगो हुने भयो विदेशमा यस्तो अभ्यास छैन मात्रै हैन संसारमा कहिले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुने भएनौ। अहिले नै साउथिस्ट एसियामा ढुवानीमा हाम्रो मंहगो भइसकेको छ। यहाँ रिसर्चको कमी र ज्ञानको कमी भएको पाइयो।
ढुवानी व्यवसायमा कसरी भ्याट लगाउने भन्ने विषयमा अहले पनि छलफल भएको अनि कार्गाे भ्याट लगाउने सन्दर्भ कसरी जोडियो?
सामान कुनै बन्दरगाहा मानौ कलकत्ताबाट आएपछि एउटा नाकामा भ्याट लिने चलन छ। संरचनामा रहेको छ। जसले सर्भिस भ्याट तिरिरहेको हुन्छ। हामीले विलिङ गर्ने हो। हामी सर्भि प्रोभाइडर हो। विलमा कुनै मुलुकमा भ्याट लगाएको छैनौ भने यहाँ कसरी लाग्छ।
समस्या समधानको लागि केही काम भएको छ त ?
हामीले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव लगायतसँग सल्लाह छलफल गरेका छौ। कुनै पनि किसिमको नीति नियम बनाएर छोड्न कार्यले गर्दा हाम्रा साथीहरू धरपकड हुने हो भन्ने त्रास रहेकै छ।
हामी धेरै परनिर्भर देखिएका छौँ, यसमा पनि हाम्रो लागत बढ्दै गएको अवस्था छ किन यसरी लागत बढीरहेको छ ?
कार्गाेमा लागत बढ्नु हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारणले गर्दा पनि बढी भएको अवस्था हो तर सरकारले नयाँ नयाँ किसिमका सिस्टमहरू लिएर आएको छ यसमा हिडेन कस्ट धेरै रहेका छन्।
उदाहरणको रुपमा कलकत्ताबाट विरगन्जसम्म सामान आउदै छ भने एउटा कन्टेनरको ८० हजार रुपैयाँलाई ढुवानी खर्च मानेर लिएको हुन्छ। तर ८० हजार हैन १ लाख ३४ हजार पैसा त्यसमा लागिरहेको हुन्छ। सरकारको भनाइ १ लाख ३४ हजार पैसा लाग्छ भने एक्ज्याक्ट १ लाख ३४ मै ढुवानी लगाउनु भन्दा उहाँहरूको सिस्टम छैन।
अब त्यहाँदेखि एक्स्ट्रा विल फ्रेट फर्वाड्सबाट जान्छ। त्यो ढुवानी खर्च भनेकाे सरकारले के बुझेको छैन भने सरकारले त्यहाँबाट सामान लिएर आओस कि जुन कम्पाेनेन्ट मुख्य मार्गको मात्रै हो डेलिभरी चार्ज एउटाबाट अर्को बन्दरगाहमा लाग्ने रहेको छ। सरकारको ठूलो राजस्व गुमेको छ।
तपाईंहरु राजस्व गुमेको छ पनि भन्नु भएको छ, सरकार राजस्व बढाउने पनि भनेको छ समस्या कहाँछ त ?
सरकारले अहिलेसमम्म बुझको छैन। उहाँहरू नीति नियम गर्नेले गर्नु भयो संसदबाट पनि नुबझी हाम्रा सांसदले पास गरिदिनु भयो सबै चीज भएपनि नीतिको समस्या हुन्छ। नीति बनेपनि कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यदल बनाएर आउनु भनेको छ।
भ्याट नलाग्ने भन्ने विषयमा कानून बनाएर आएको कुरा लाउने नलाउने भन्ने छैन। मोटामोटी नाकासम्म आएकोलाइ नलगाउने नाका भित्रलाई लगाउने भन्ने कुरा भएको छ। १० हजार ५ हजार भ्याट लगाएर त्यति ठूलो लाग्छ भनेर जान्छ जस्तो लाग्दैन।
अर्को कुरा भ्याट कै कुरा गर्दा इण्डियनले बिल देखाउँदा भ्याट लाग्दैन भनेपछि नेपालीलाई मात्रै हो। इण्डियाको गाडी ७२ सम्म आउन पर्छ इण्डियाबाट आएको विललाई भ्याट लाग्दैन। यसले हामीलाई विस्थापित गर्ने गरी काम भएको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, श्रावण १८, २०७६, ०९:०८:००